Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo xariga ka jartay Xarunta caafimaadka ee Jariiban | Puntland Ministry of Health
Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa xariga ka jartay xarunta Caafimaadka ee degmada Jariiban ee gobolka Mudug.
Munaasabadda xariga jarusta ayaa waxaa ka hadlay masuuliyiin kala ah Wasiirka Caafimaadka Puntland Dr Cabdinaasir Cuuke, Gudoomiyaha degmada Jariiban, Odayaasha iyo Bahda Caafimadka ee degmada Jariiban.
Ugu horayn Madaxa Caafimaadka degmada Jariiban ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka uu u shaqeeyo Isbitaalka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Isuduwaha wasaaradda Caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug.
Qaar ka mid ah Waxgaradka degmada Jariiban ayaa soo dhoweeyey xarig ka jarista xarunta Caafimaad ee degmadu ay yeelatay.
Guddoomiyaha degmada Jariiban ee gobolka Mudane Maxamed Yuusuf Shirwac ayaa dhankiisa wuxuu sheegay inay degmadan Baahi u qabtay Xarun Caafimaad.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka dowladda Puntland Mudane C/naasir Cismaan Cuuke ayaa ka sheekeeyey marxaladiihii uu soo maray isbitalkan laga furay degmada Jariiban waxaa kaloo wasiirku sheegay mihiimadda ay leedahay xaruntani iyo in ay ka faa’iidaysan doonaan dadka ku nool degmada Jariiban.